လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်သဘာဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည် (၂၀၁၂) - Your Brain On Porn
စိတ်ပညာ & စိတ်ရောဂါကုသမှုအတွက်စက်တင်ဘာလ 12, 2012 တွင်
လိင်သည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ သို့သော်လူအများစုကသိပ်စိတ်မထင်ကြပါ။ ရလဒ်အသစ်များအားစက်တင်ဘာ ၁၂ ရက်က open access ဂျာနယ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည် PLOS ONE ဤဖြစ်စဉ်သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကြောင့်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်းများကလူသားတို့၏သဘာဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကိုအမှန်တကယ်ယိုယွင်းစေသည်။
လေ့လာမှု၏စာရေးဆရာများ, နယ်သာလန်အတွက် Groningen တက္ကသိုလ်မှ၏ Charmaine Borg ကဦးဆောင်ပြုလုပ်အတွက်အင်းဆက်ပိုးမွှားတွေနဲ့ခွက်ထဲကနေသောက်သုံးတစ်ခုသို့မဟုတ်အသုံးတစ်ရှူးနှင့်အတူမိမိတို့လက်ကိုရှင်းလင်းတူသောအမျိုးမျိုးသောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်-ပေုံလုပ်ရပ်များ, ဖြည့်စွက်ဖို့အမျိုးသမီးသင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ (အဆိုပါသင်တန်းသားများကသတိပြုမိကြဘူး, ဒါပေမဲ့အင်းဆက်ပိုးမွှားပလပ်စတစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့နှင့်တစ်ရှူးအသုံးပြုပေါ်လာအောင်မှင်နှင့်အတူရောင်စုံခံခဲ့ရသည်။ )
လိင်မှုနှိုးဆွသောဘာသာရပ်များသည်လိင်မှုနှိုးဆွမှုမရှိသောဘာသာရပ်များထက်စက်ဆုပ်ရွံရှာမှုနည်းပါးသောလုပ်ငန်းများကိုတုန့်ပြန်သည်။ စက်ဆုတ်ခြင်း တုန့်ပြန်။
နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များ: စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်-သွေးဆောင်ရှောင်ရှား၏ Borg က C, de Jong က PJ (2012) ခံစားချက်များကိုအမျိုးသမီးများအတွက်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထအောက်ပါအားနည်းစေ။ PLoS ONE7(9): e44111 ။Doi: 10.1371 / journal.pone.0044111
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှုသည်သဘာဝစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်တုံ့ပြန်မှုကိုလျော့နည်းစေနိုင်သည်။ စက်တင်ဘာ 12, 2012 ။ http://medicalxpress.com/news/2012-09-sexual-arousal-decrease-natural-disgust.html
Borg က C, de Jong က PJ (2012) စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်-သွေးဆောင်ရှောင်ရှား၏ခံစားချက်များကိုအမျိုးသမီးများအတွက်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထအောက်ပါအားနည်းစေ။ PLoS ONE7(9): e44111 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0044111
Charmaine Borg*, ပတေရုသဂျေ de Jong က
လက်တွေ့စိတ်ပညာဌာနနှင့်စမ်းသပ် Psychopathology, Groningen က, Groningen ကတက္ကသိုလ်, အဆိုပါ Netherlan
လိင်နှင့်ရွံရှာမကြာခဏဝိရောဓိအဖြစ်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိသောအခြေခံ, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သက်ဆိုင်ရာ function တွေဖြစ်ပါတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှာပါဝင်နေတဲ့လှုံ့ဆော်မှုအနည်းဆုံးအခြေအနေတွင်ထဲကပြင်းပြင်းထန်ထန်မြင့်မားသောရွံရှာအရည်အသွေးတွေကိုကိုင်ထားမှရိပ်မိနေကြပါတယ်။ တံတွေး, ချွေး, သုတ်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အနံ့အင်အားအကောင်းဆုံးရွံရှာ elicitors အကြားရှိပါတယ်။ ဤလူမျိုးကိုမှာအားလုံးပျြောမှေ့စလိင်ဆက်ဆံအတွက်အောင်မြင်ဖို့ဘယ်လောက်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုမှု။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုယာယီရွံရှာအထူးသလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆွဲထုတ်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတကယ်ကဤလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ဖို့မဆိုင်းမတွအားနည်းသွားစေခြင်းငှါလျော့နည်းစေကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သင်တန်းသားများကို (ကျန်းကျန်းမာမာအမြိုးသမီးမြားခဲ့ကြသည်n အဆိုပါလိင်စိတ်နိုးထ, non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုသဘော arousal, သို့မဟုတ်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုတစ်စု: = 90) ကျပန်းသုံးအုပျစုမြား၏တဦးတည်းမှခွဲဝေ။ ရုပ်ရှင်ဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုသက်ဆိုင်ရာစိတ်ဓါတ်များပြည်နယ်ထုတ်ယူနိုင်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ လိင်နှင့်ဆက်စပ်သော (ဥပမာပါဝင်သော 16 အပြုအမူတာဝန်များကိုအတွက်စေ့စပ်သင်တန်းသားများသည်, vibrator ချောဆီ) နှင့် Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သော (ဥပမာဖလား၌ကြီးမားသောအင်းဆက်ပိုးမွှားတွေနဲ့အသီးဖျော်ရည်၏တစ်ငုံအရင်သောက်ယူ) လှုံ့ဆော်မှု, ရွံရှာခြင်းနှင့်အမှန်တကယ်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူ၏ခံစားချက်များကိုအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထများ၏သက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာရန်။
အဆိုပါလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုတစ်စုကအခြားအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လျော့နည်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အဖြစ်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အလားတူစိတ်သဘောထား non-လိင်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ထင်ရှားခဲ့သည်။ လိင်နှင့် Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူတာဝန်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုသည် (ဆိုလိုသည်မှာသူတို့ကအခြားအုပ်စုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအလုပ်များကိုအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းကောက်ယူ) လျော့နည်းရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူပြသခဲ့သည်။
ဒီလေ့လာမှုကလိင်စိတ်နိုးထအမျိုးသမီးဂုဏ်သတ္တိများကိုဆွဲထုတ်ရွံရှာခြင်းနှင့်ရွံရှာနှင့်အတူ interplays, ဤဆက်ဆံရေးဟာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုဖို့အမှန်တကယ်ချဉ်းကပ်မှုထိခိုက်ခြင်းဖြင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာကျော်လွန်သွားသရုပ်ပြထားပါတယ်ဘယ်လိုစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။ ဒါကွောငျ့ဒီကျနော်တို့နေဆဲပျြောမှေ့စလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွင်းထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စီမံခန့်ခွဲပုံကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ထို့အပြင်ဤတွေ့ရှိချက်များအနိမ့်လိင်စိတ်နိုးထအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သော့ချက်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။
ကိုးကား: စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်-သွေးဆောင်ရှောင်ရှား၏ Borg က C, de Jong က PJ (2012) ခံစားချက်များကိုအမျိုးသမီးများအတွက်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထအောက်ပါအားနည်းစေ။ PLoS ONE7(9): e44111 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0044111
အယ်ဒီတာ: Marianna Mazza, ရောမမြို့, အီတလီ၏မွငျ့မွတျနှလုံး၏ကက်သလစ်တက္ကသိုလ်
Received: မတ်လ 7, 2012; လက်ခံခဲ့သည်: ဇူလိုင်လ 30, 2012; Published: စက်တင်ဘာလ 12, 2012
မူပိုင်: © 2012 Borg, de Jong က။ ဤသည်အသိအမှတ်ပြုကြသည်မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်ထောက်ပံ့ထားတဲ့ Open-access ကိုတားမြစ်ခြင်းမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြုရသောကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေဆောင်းပါး, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွားဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: အတူတူတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာရန်ပုံငွေရာမော်လ်တာအစိုးရပညာသင်ဆုအစီအစဉ်ထောက်ပံ့ငွေအရေအတွက်ကို MGSS_PHD_2008-12 အတူ Groningen ကတက္ကသိုလ်နှင့် University Medical Center မှာ Groningen ကထောက်ခံမှုကဒီလေ့လာမှု။ အဆိုပါဒကာလေ့လာမှုဒီဇိုင်း, အချက်အလက်စုဆောင်းခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ထုတ်ဝေရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သို့မဟုတ်လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ပြင်ဆင်မှုမရှိအခန်းကဏ္ဍရှိခဲ့ပါတယ်။
"တပ်မက်နေတဲ့တော်တော်မိန်းကလေးရဲ့ပါးစပ်နမ်းမည်သူတစ်ဦးကလူကို, ဖြစ်ကောင်းသူမ၏သွား-ဖြီးသုံးပြီး၏စိတ်ကူးကိုစက်ဆုတ်စိတ်ပျက်မိကြောင်းနိုင်ပါသည်။ " ဇီးဂမွန် Freud ။
တစ်ဦးခုခံကာကွယ်ယန္တရားအဖြစ်ပှားရပ်တည်ချက်နှင့်ရွံရှာအဖြစ်လိင်, နှစ်ဦးစလုံး၏အခြေခံ, ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများမှာသေးသူတို့၏ဆကျဆံရေးဝိရောဓိများနှင့်ဖြစ်နိုင်သည်ပိတ်ဆို့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရွံရှာပြင်ပညစ်ညမ်းမှုကနေသက်ရှိကာကွယ်ပေးရန်ခုခံကာကွယ်ယန္တရားအဖြစ်ပြောင်းလဲခံရဖို့စောဒကတက်ထားသည် , ။ အကျိုးဆက်ကဒီကာကွယ်ရေးယန္တရားထဲမှာပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအဓိကကိုယ်တွင်းအင်္ဂါသို့မဟုတ်ကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်အပိုင်းများကိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့နယ်စပ်တလျှောက်တွင်အိပ်လူသိများကြသည်။ ထို့ကြောင့်ခံတွင်းနှင့်လိင်အင်္ဂါကသူတို့ aperture နှင့်ညစ်ညမ်းမှုမြင့်မားရိပ်မိအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်အပြင်းထန်ဆုံးရွံရှာ sensitivity ကို, ပြသသောခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများအကြားရှိပါတယ် ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံမှာပါဝင်နေတဲ့လှုံ့ဆော်မှုပြင်းပြင်းထန်ထန်တံတွေး, ချွေး, သုတ်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အနံ့အင်အားအကောင်းဆုံးရွံရှာ elicitors အကြားအရည်အချင်းနှင့်အတူမြင့်မားရွံရှာအရည်အသွေးတွေကိုကိုင်ထားမှရိပ်မိ (အနည်းဆုံးအခြေအနေတွင်ထဲက) ယေဘုယျ၌ရှိကြ၏ ။ ရှင်းနေသည်မှာထို့နောက်ရွံရှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည့်ယန္တယားကိုရှင်းပြဖို့ကူညီရသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအတွက်အရေးပါသောရောက်စွက်ဖက်အချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် , .
လှုံ့ဆော်မှုကိုဆွဲထုတ်အင်အားအကောင်းဆုံးရွံရှာအများအပြားလည်းလိင် (ဥပမာ, တံတွေးများနှင့်ချွေး) တွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုအဆိုပါတွေ့ရှိချက်ရွံရှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်စေခြင်းငှါဘယ်လိုရှင်းပြကူညီစေခြင်းငှါမသာ, ဒါပေမယ့်လည်းရှိခြင်းရှိလူများအောင်မြင်ဖို့ဘယ်လောက်၏အရေးပါသောမေးစရာ အားလုံးမှာပျြောမှေ့စလိင်။ တဦးတည်းဖြစ်နိုင်သမျှရှင်းပြချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကိုယာယီအထူးသလှုံ့ဆော်မှုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆွဲထုတ်သည့်ရွံရှာမှုကိုလျော့နည်းစေကြောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အယူအဆလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရွံရှာထုတ်ယူလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ဖို့မဆိုင်းမတွအားနည်းသွားစေခြင်းငှါဖြစ်နိုင်သည်။ အကျိုးဆက်ဒီလှုံ့ဆော်မှုများမပြောင်းလဲရွံရှာဂုဏ်သတ္တိများ၏ကြားမှနောက်ထပ်ချဉ်းကပ်အပြုအမူလှုံ့ဆျောပေးလိမ့်မယ်။ တနည်းအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးယန္တရားများဖျော်ဖြေပွဲလုပျဆောငျနိုငျသညျ။ အထက်ပါနှင့်အညီ, အခြားဖြစ်နိုင်ခြေရှင်းပြချက်တိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ရွံရှာဂုဏ်သတ္တိများကိုပိုမိုအလွယ်တကူလိင်ကဤရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုမှအမှန်တကယ်ထိတွေ့မှုကာလအတွင်းနှိုးဆော်ခြင်းခံကြသောအခါ, (ဆိုလိုသည်မှာလေ့) လျော့နည်းကျဆင်းစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။
ဤဂျာမန်, လတ်တလောစမ်းသပ်လေ့လာမှုလိင်စိတ်နိုးထအမှန်ပင်အထီးသင်တန်းသားများအတွက်တိကျတဲ့လှုံ့ဆော်မှုများ၏ရွံရှာဂုဏ်သတ္တိများကိုလျော့ကျစေနိုင်တယ်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေး။ လိင်စိတ်နိုးထထုတ်ယူနိုင်ရန်, စမ်းသပ်အုပ်စုတစ်စုခေါ်ဆောင်သွားအမျိုးသမီးပုံရိပ်တွေ watched ။ ဤရွေ့ကားအထီးကျောင်းသားများကိုပြီးတော့လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်အမျိုးမျိုးသောအာရုံခံပုံစံများ (ဆိုလိုသည်မှာ, အမြင်အာရုံ, ထိတွေ့နိုင်သော, အာရုံနှင့် olfactory) မှရေးဆွဲခဲ့ related Non-လိင်ရွံရှာ elicitors တစ်စီးရီးထိတွေ့ခဲ့သည်။ ထိတွေ့နိုင်သောရွံရှာ elicitors အဖြစ်ဥပမာအားဖြင့်, သင်တန်းသားများကိုသေးငယ်တဲ့လေး lubricated ကွန်ဒုံး (လိင်နှင့်ဆက်စပ်သော) သို့မဟုတ်အအေးပဲဖြစ်စေပါဝင်တဲ့ပုံးတစ်ပုံးထဲမှာဖွင့်လှစ် (ဒါကြောင့်အကြောင်းအရာမမြင်နိုင်ခဲ့) နှင့်ဝက်ပေါင်ခြောက်ဟင်းချို (Non-လိင်ဆက်စပ်မှတဆင့်၎င်းတို့၏ကြီးစိုးလက်ကိုနေရာချခိုင်းတယ် ) သူတို့ရဲ့နှာခေါင်းမဆိုသက်ဆိုင်ရာအနံ့၏အမြင်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ဂွမ်းပလပ်အတူပိတ်ဆို့ခဲ့ကြသည်နေစဉ်။ စိတ်ဝင်စားစရာစမ်းသပ်အုပ်စုတွင်ပါဝင်သူ Subject လိင်နှိုးဆွမခံခဲ့ရသူထိန်းချုပ်မှုအခြေအနေများအတွက်သင်တန်းသားများကိုထက်လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောရွံရှာ elicitors အားဖြင့်လျော့နည်းရွံရှာဖြစ်ခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြ ။ ဤတသမတ်တည်းတစ်ဆက်စပ်မှုလေ့လာမှုသူတို့ကပိုလိင်နှိုးဆွသောအခါနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားမိန်းမတို့တစ်ခုခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်လျော့နည်းရွံရှာအစီရင်ခံကြောင်းပြသ ။ အလားတူပင်အခြားလေ့လာမှုများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုကြသောလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါ၏အန္တရာယ်ကိုအကြောင်းကိုတရားစီရင်ပိုင်ဖျက်နိုင်မပြကြနဲ့လိင်စိတ်နိုးထဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်တစ်ဦးခိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဖို့ပြသထားသည် ။ အလားတူထဲမှာလိင်နှိုးဆွသည့်အခါလူတို့သညျသူတို့သဘောထားအမြင်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သူတို့လိင်စေ့စပ်မရသောအခါရှံမုသတင်းပေးပို့ထားတဲ့အလွန်အဆီသူသည်အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်လို့အစီရင်ခံကြောင်းသရုပ်ပြခဲ့ပြီး ။ ထို့ကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်လိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများ (သို့) လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်လုပ်ဆောင်နိုင်သည့်ယန္တရားအမျိုးမျိုးကိုလျှော့ချနိုင်သည်ဟုငြင်းခုန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ရွံရှာခြင်း၊ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာနယ်နိမိတ် (ဥပမာ - ၁၂ နှစ်အရွယ်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း) သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းမှုအန္တရာယ် (ဥပမာ) ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။ ထို့ကြောင့်လိင်စိတ်နိုးထမှုသည်လူတို့အားအချို့သော (စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်) လှုံ့ဆော်မှုများကိုရှောင်ရှားရန်ပုံမှန်အားဖြင့်ကူညီသောယန္တရားများကိုလွှမ်းမိုးနိုင်သည်။
ယခင်တွေ့ရှိချက်များကလူနေဆဲအထူးသလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအဘယ်ကြောင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအရှင်ဝေး, elucidate ဟန်ဖြစ်သော်လည်းဤအတွေ့ရှိချက်စိတ်ကူးအခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်. ခံစားချက်တွေကိုသို့မဟုတ် Self-အစီရင်ခံစာအစီအမံ subjective ဖို့ကန့်သတ်ထားပါသည် -။ ထို့ကြောင့်နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုတွေအသွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထတမင်တကာအစီရင်ခံရွံရှာဒါပေမယ့်လည်းအမှန်တကယ်အထူးသဖြင့်ကနဦးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ဖို့လူရဲ့စိတ်အားထက်သန်လျှော့ချထဲမှာမသာအောင်မြင်သောရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပါလိမ့်မယ်။ ရွံရှာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်အကွာအဝေးကိုဖန်တီးအရှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုနှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ရှောင်ရှားခြင်းတုံ့ပြန်မှုသိသာသည်။ ဒါဟာအလွန်ကောင်းစွာကြောင်းအပြုအမူလိင်စိတ်နိုးထနေဖြင့် modulated ဖြစ်ပါတယ်ခံရအကျိုးဆက်ကိုရှောင်ရှားဖို့စိတ်သဘောထားအားနည်းနေနိုင်ဘူး။ ဥပမာ, လိင်၏အခြေအနေတစ်ခုသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွံရှာ၏လျှော့ချရေးတစ်ဦးအထူးသဖြင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုနှင့်အဆက်အသွယ်ဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်မျှသာအတိုင်းလိုက်နာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အပြင်အထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏ရွံရှာ-ဆွဲထုတ်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထများ၏သက်ရောက်မှုပေါ်ဤအကြောင်းအစောပိုင်းကတွေ့ရှိချက်အများစုလူတို့အားကန့်သတ်ခံခဲ့ရ ။ ယောက်ျားနှင့်မိန်းမများ၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ် differential ကိုအခန်းကဏ္ဍပေးထား, အမျိုးသမီးရဲ့မြင့်မားတဲ့ sensitivity ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖို့ ,  နှင့်ရောဂါကူးစက်မှု၎င်းတို့၏ပိုမိုမြင့်မားအားနည်းချက် , ဤတွေ့ရှိချက်အမျိုးသမီးနမူနာလည်းကြံ့ခိုင်ရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုလည်းလိင်စိတ်နိုးထသော induction လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုတုံ့ပြန်ရွံရှာ attenuate မယ်လို့အမျိုးသမီးရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အရေးကြီးတာကကျနော်တို့ရွံရှာ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ခံစားချက်တွေကိုအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုဆန်းစစ်ဒါပေမယ့်လည်းလိင်စိတ်နိုးထစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုဆီသို့ဦးတည်သင်တန်းသားများကို '' အမှန်တကယ်ချဉ်းကပ်မှုလွယ်ကူချောမွေ့မယ်လို့ရှိမရှိစမ်းသပ်ပြီးသာ။ ထိုမှတပါး, ရွံရှာဂုဏ်သတ္တိများ၌ဤလျှော့ချရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ကန့်သတ်ခံရလိမ့်မည်သို့မဟုတ်ယေဘုယျအားဖြင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုသက်ဆိုင်ကြောင်းပိုမိုယေဘုယျဖြစ်စဉ်ကိုကိုယ်စားပြုမယ်လို့ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့အလို့ငှာ, ငါတို့သည်လည်းတိုက်ရိုက်မဟုတ်သော, ဆိုလိုသည်မှာ (လိင်ရည်ညွှန်းမယေဘုယျအားစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုပါဝင်သည် -sex related) ။
ထို့အပြင်ယခင်အထောက်အထားများကိုရွံရှာတဲ့ပေါင်းတစ်စည်းတည်းစိတ်လှုပ်ရှားမှုတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမယ့်ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲရှိပါတယ်ကြောင်းကိုအကြံပြုသည်။ လက်ရှိသုတေသနအမည်ရ core ကို, တိရစ္ဆာန်-Reminder, ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားရွံရှာလှုံ့ဆော်မှု, စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုလေးခုကွဲပြားခြားနားသောအမျိုးအစားမတူညီနိုင်အကြံပြု , ။ ဒါဟာရွံရှာပါးစပ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုတခုမှကြောင်းစောဒကတက်ထားသည်နှင့်အချိန်ကျော်ကတခြား Self-ကာကွယ်မှုစနစ်များနှင့်နယ်နိမိတ်ထည့်သွင်းရန်ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး , ။ နောက်ပိုင်းတွင်, ရွံရှာ unhygienic ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ရောဂါများအတွက်အလားအလာအချက်ပြစေခြင်းငှါလှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုကျယ်ပြန့်ဖို့အခြေခံတုံ့ပြန်မှုစဉ်းစားသည် ။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤအခြေခံစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုပိုပြီးပြည့်စုံလွှမ်းခြုံများအတွက်လေးရွံရှာ Subtype ထံမှလှုံ့ဆော်မှုပါဝင်သည်ဟုအမူအကျင့်တာဝန်များကိုထည့်သွင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်: တစ်ရှပ်အင်္ကျီပေါ်တွင်တင် core ကိုရွံရှာ (ဥပမာ, ကအပေါ်တစ်ဦးလူနေမှုတီကောင်နဲ့ဘီစကစ်မုန့်ကိုစား), ကိုယ်ကျင့်တရားရွံရှာ (ဥပမာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြုမူနေစဉ်အတွင်းဝတ်ဆင်တဲ့ pedophile) ၏, တိရစ္ဆာန်-Reminder ရွံရှာ (ဥပမာ, တစ်ဦးဦးသေဆုံးတိရစ္ဆာန်သင့်လက်မှာရှိတဲ့အရိုးကိုင်) နှင့်ညစ်ညမ်းရွံရှာ (ဥပမာ, တစ်ဦးရေချိုးခန်းအိတ်တစ်ဦးကိုသုံးအောက်ခြေ / knickers နေရာ) ။ ကျနော်တို့ရွံရှာ၏, ဤလေးယောက် Subtype များ၏အခြေအနေတွင်သင်တန်းသားများကို '' ပုဂ္ဂလဒိဋ္နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုကိုတိုင်းတာ။
လိင်စိတ်နိုးထအထူးသလှုံ့ဆော်မှုများ၏ရွံရှာဂုဏ်သတ္တိများ attenuates လျှင်စမ်းသပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကျနော်တို့လိင်စိတ်နိုးထသွေးဆောင်ဖို့ခေါ်ဆောင်သွားရုပ်ရှင်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ တစ်ဦးကြားနေရုပ်ရှင်ကလစ်သည့်အခြေခံအခွအေနေအဖြစ်အစေခံနိုင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းခဲ့သည်သော်လည်းငါတို့သည်လည်း, တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျအားဖြင့်နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်ကလစ် (အပြုသဘော arousal) ပါဝင်သည်မျှသာအပြုသဘော arousal ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအဘို့ကိုထိန်းချုပ်ရန်
ကျန်းမာတဲ့အမျိုးသမီးကျောင်းသားများကို (ဎ = 90, ယုတ်အသက်အရွယ် = 23.12; SD က = 1.99) တက္ကသိုလ်ဥပစာအပေါ်ကြော်ငြာကနေတဆင့် Groningen ကတက္ကသိုလ်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှု '' နှိုးဆွသောရုပ်ရှင်နှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာတာဝန်များကို '' အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုအဖြစ်ကြော်ငြာခဲ့ပါတယ်နှင့်ရွေးချယ်ရေး-ဘက်လိုက်မှု minimize မှသကဲ့သို့ရွံရှာသို့မဟုတ်လိင်ဖြစ်စေမဖျောပွထားခဲ့ပါတယ်။ screening လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ၏ရှေ့မှောက်တွင်တုံ့ပြန်သင်တန်းသားများကို '' ကိုအကျိုးသက်ရောက်စေခြင်းငှါ, အဖြစ်အဘယ်သူမျှမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်ခဲ့သူကိုသာပါဝင်သူများပါဝင်သည်နိုင်ရန်အတွက်အားလုံးပါဝင်သူများနှင့်အတူကောက်ယူခဲ့သည်။ အားလုံးသင်တန်းသားများမှာအများဆုံးအလယ်အလတ်အရက်နှင့်နီကိုတင်းသုံးစွဲမှုအစီရင်ခံအပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ငြင်းပယ်ခဲယဉ်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု။ ဒီလေ့လာမှုမှာအားလုံးပါဝင်သူများသီးသန့်လိင်ကွဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါအုပ်စုသုံးစုအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက် (ရှိခဲ့သည်p> .08) လူမှု - လူ ဦး ရေဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (ဥပမာ၊ စိတ်ခံစားချက်များတိုင်ကြားချက်များ၊ အသက်၊ ပညာရေး၊ ဆက်ဆံရေးအခြေအနေ၊ နောက်ဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်သန္ဓေတားခြင်းအသုံးပြုမှု) အကြောင်း။
ကျနော်တို့ကိုသူတို့မှန်မှန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားစုဆောင်းမှုအတွက်အသုံးပြုကြောင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးစနစ်ကနေ select လုပ်ပေးနိုင်မယ့်ရက်စွဲကိုအပေါ်ဓာတ်ခွဲခန်းထဲမှာစမ်းသပ်ဘို့လာရန်အလားအလာသင်တန်းသားများကိုမေးတယ်။ ကျနော်တို့လေ့လာမှု၏သဘောသဘာဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံချိန်စံညွှန်းမီသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုပေးအပ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကသတင်းအချက်အလက်ကိုဖတ်ရှုပြီးနောက်တိုင်းအလားအလာတစ်ဦးချင်းစီကိုလေ့လာတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်တယ်။ ထိုအခါမှသာကျပန်းအောက်ပါ3အုပ်စုများ၏တဦးတည်းသောပါဝင်သူခွဲဝေ: တစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ, တစ်ဦးအပြုသဘောနှိုးဆော်ခြင်းနှင့်ကြားနေအုပ်စုသည်။ အဆိုပါအုပ်စုသုံးစုအသီးအသီး 30 သင်တန်းသားများကိုပါဝင်သည်။
ခံစားချက် induction လှုံ့ဆော်မှုပစ္စည်း
စိတ်ခံစားမှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသောလှုံ့ဆော်မှုတွင်အကြောင်းအရာ ၃ ခုအကြားအသုံးပြုသောရုပ်ရှင် ၃ ခုပါ ၀ င်သည်။ ၁) လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုကိုသွေးဆောင်ရန်ရွေးချယ်ထားသောအမျိုးသမီးနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးသော erotica (ခရစ္စလီဒီဒပ်မှ“ de Gast”)၊ (၂) အားကစား / မြင့်မားသော adrenalin နှိုးဆွသည့်ကလစ် (ဥပမာ - အမြင့်ပေ / ရေငုပ်ခြင်း၊ တောင်တက်ခြင်း) သည်အများအားဖြင့်အပြုသဘောဆောင်သောလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားကိုထိန်းချုပ်ရန်နှိုးဆွမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ (၃) ရထားစီးနင်းခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောရှုခင်းများနှင့်ထိတွေ့နေသည့်ကြားနေရုပ်ရှင်၊ အခြေခံသို့မဟုတ်ရည်ညွှန်းမှုအခြေအနေတို့ဖြစ်သည်။ ရုပ်ရှင်ကားတစ်ခုစီသည် ၃၅ မိနစ်ခန့်ကြာသည်။ လူသိရှင်ကြားရရှိနိုင်သည့်ရုပ်ရှင်ကလစ်များထဲမှနှစ်ခုကိုရုပ်ရှင်အဖွဲ့နှစ်ခုမှသုတေသနအဖွဲ့မှရွေးချယ်သည်။ ရုပ်ရှင်ကလစ်တိုင်းကိုအတည်ပြုပြီးစမ်းသပ်မှုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိသောအမျိုးသမီးကျောင်းသား ၁၅ ယောက်နှင့်အတူစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ရွေးချယ်ထားသောရုပ်ရှင်ကားသုံးခုသည်ရည်ရွယ်ထားသည့်အကျိုးသက်ရောက်စေသောအခြေအနေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။ စားပွဲတင် 1။ ဤရွေ့ကားကျောင်းသားများကို = သူတို့ကရုပ်ရှင်အထွေထွေ၏ခံစားချက် (အပြုသဘော) arousal နှင့်သုညကနေအထိလိင်စိတ်နိုးထဆွဲထုတ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ခံစားရဘယ်လောက်, အ3ဇာတ်ကားတွေကိုရွေးချယ်ခြင်းနှင့် 10 စင်တီမီတာအရှည်နှင့်အတူ Visual Analogue ကြေးခွံ (vas) အပေါ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲဖို့တောင်းခဲ့ကြစောင့်ကြည့် မဟုတ်မှာအားလုံး 10 မှ = အလွန်။ စားပွဲတင် 1ယေဘုယျ arousal နှင့်လိင်စိတ်နိုးထ၏ရှုထောင့်အပေါ်တစ်ခုချင်းစီကိုနှိုးဆွ-type အမျိုးအစား၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကဲဖြတ်ဖော်ပြသည်။ ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings ၏ယေဘုယျပုံစံဟာစီးပွားရေးနှိုးဆွမှုပစ္စည်းများများ၏တရားဝင်မှုမှ attests, စားပွဲတင် 1။ ရွေးချယ်ထားသောရုပ်ရှင်ပစ္စည်းရည်ရွယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုထုတ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ရှိမရှိအသေးစိတ်ဆန်းစစ်ဖို့ကျနော်တို့ t-စမ်းသပ်မှုအားဖွငျ့သကျဆိုငျရာနှိုင်းယှဉ်အကဲဖြတ်, စားပွဲတင် 1.
စားပွဲတင် 1 ။ စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအမျိုးအစားတစ်ခု function ကိုအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအတိုင်းအတာအဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အကဲဖြတ်။
ဒေါင်းလုပ်: PowerPoint ဆလိုက် | ပိုကြီးတဲ့ပုံရိပ် (56KB PNG) | မူရင်းပုံရိပ် (125KB TIFF)
ကျနော်တို့ပါဝင်သူတစ်ဦးချင်းစီကိုသက်ဆိုင်ရာရွံရှာအမျိုးအစားနှုန်း 16 တာဝန်များကိုအပေါ်တောင်းဆိုထားသောတာဝန်ကျရာလုပ်ဆောင်သွားရန်ဟုမေးခဲ့4အပြုအမူတာဝန်များကို / တွေကိုရှိခဲ့ပါတယ်။ နိဒါန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်တော်4ကွဲပြားခြားနားသောရွံရှာအမျိုးအစားများ, အမည်ရ, core ကို, ညစ်ညမ်းမှု, တိရစ္ဆာန်-Reminder နှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားရွံရှာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောကျဆကျတှဲ S1 အဆိုပါ 16 အပြုအမူအလုပ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ပေးပါသည်။ ထဲမှာရေတွက်အဖြစ် core ကိုရွံရှာ၏ SUBCATEGORY အဆိုပါတာဝန်များကိုပါဝင်သည် နောကျဆကျတှဲ S1 ကြောင်း 1, 2, 3,4ဖြစ်၏ ကိုယ်ကျင့်တရားရွံရှာတာဝန်အရေအတွက်ကို 5, 6, 7, 8 ပါဝင်သည်; တိရိစ္ဆာန်-Reminder ရွံရှာတာဝန်နံပါတ်များကို 9, 10, 11, 12 ပါဝင်သည်; နှင့်ညစ်ညမ်းရွံရှာတာဝန်များကို 13, 14, 15, 16 ရေတွက်ပါဝင်သည်။ ထိုအမူအကျင့်အလုပ်များကိုအပိုင်းတာဝန်နံပါတ်များကို 5, 8, 11, 15, 16 အပါအဝင်လိင်တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ရေးစပ်ခဲ့သည်။ အဆုံးစွန်သောနှစ်ခုအမျိုးအစားပိုင်းတွင်တစ် Ph.D ကျောင်းသားသုံးမာစတာရဲ့ကျောင်းသားများနှင့်တစ်ဦးစိတ်ပညာပါမောက္ခ၏ရေးစပ်ခဲ့သည့်သုတေသနအဖွဲ့အသုံးပြုပုံအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် (post ကို hoc) လိင်ဆက်စပ်မှု၏အတိုင်းအတာအပေါ်လှုံ့ဆော်မှု (ဆိုလိုသည်မှာ 20 အပြုအမူတာဝန်များကို) ဘယ်လောက်ရှိသလဲ, ငါတို့၏နမူနာ၏လွတ်လပ်သော 16 စိတ်ပညာကျောင်းသားများ, ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည်။ နှုန်းသုည = မဟုတ်သက်ဆိုင်ရာမှာအားလုံးထံမှ = အလွန်အမင်းသက်ဆိုင်ရာ 100 အရွယ်ရှိကြောင်း vas အပေါ်ပြုမိခဲ့သည်။ ကျနော်တို့သင်တန်းသားများအတွက်အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့လျော့နည်းသိသာအောင်နှစ်ခုသည်အခြားရှုထောင့် (ဆိုလိုသည်မှာ, အစားအစာသက်ဆိုင်ရာများနှင့်ညစ်ညမ်းသက်ဆိုင်ရာ) ပါဝင်သည်။ by နဲ့ကြီးမားတဲ့သည်ဤဒေတာကိုလိင်ဆက်စပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးဌာနခွဲအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ လိင်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်များကို (M = 67.5, SD က = 9.8) ၏ယုတ်ရမှတ်, non-လိင်သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများ (M = 8.6, SD က = 3.1) ၏ယုတ်ရမှတ်ထဲကနေသိသိသာသာကွဲပြား t(19) = 22.9, p<.001, လိင်ဆက်စပ်မှုအပေါ်။ ပျမ်းမျှပျမ်းမျှ ၈.၇ ရှိပြီးလိင်နှင့်မသက်ဆိုင်သောအလုပ်များအတွက်ရမှတ်များမှာ ၁.၁ မှ ၄၁.၃ နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန်များတွင်ပျမ်းမျှ ၆၉.၆ ဖြစ်ပြီးရမှတ်များသည် ၄၆.၄ မှ ၈၃.၉ အထိအသီးသီးရှိသည်။ ဤဖော်ပြချက်ဆိုင်ရာကိန်းဂဏန်းများအရလိင်နှင့်လိင်မဟုတ်သောအမျိုးအစားနှင့် ဦး စားပေးတာ ၀ န်ရှိသည်။ သို့သော်လည်း Task 8.7 သည်လိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်မသက်ဆိုင်သောအခြားအုပ်စုများနှင့်များစွာကွဲပြားမှုရှိကြောင်းပြသပြီး၎င်းသည်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ် မူတည်၍ မြင့်မားသည် (M = 1.1) ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကို Task 41.3 နှင့်မပါဘဲပြုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ရလဒ်တစ်ခုအနေဖြင့်တူညီသောရလဒ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ ဆွေးနွေးမှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောလိင်နှင့်လိင်မဟုတ်သောသက်ဆိုင်သည့်လုပ်ငန်းများကိုရွေးချယ်ရန်သုတေသနအဖွဲ့မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ရလဒ်များမပြောင်းလဲသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကြိုတင်ခွဲဝေထားသည့်အမျိုးအစားကိုအမျိုးအစားခွဲများဖြင့်ဆက်လက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ non- လိင်သက်ဆိုင်ရာ (ကိုယ်ကျင့်တရား) အမျိုးအစားအတွက် pedophile အားဖြင့်ဝတ်ဆင်တဲ့ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အဆက်အသွယ်။ အသေးစိတ်ကိုကြည့်ပါ နောကျဆကျတှဲ S3။ စာရေးသူစိတ်ဝင်စားစာဖတ်သူများနှင့်အတူအပိုဆောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမျှဝေဖို့ဆန္ဒရှိဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများအတှကျပထမဦးဆုံးစာရေးဆရာကိုဆက်သွယ်ပါ။
တစ်ခုချင်းစီကိုတာဝန်တစ်ခုစပီကာကိုကျော်စမ်းသပ်ပေးသောအဆင့်လေးဆင့်ပါဝင်သည်: ဈ) task ကိုစောငျ့ရှောကျ; ii) တာဝန်များ၏အထင်အမြင်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ, iii) အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဆောင်; ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်ခြေလှမ်းအဖြစ်, ဃ) ပြီးစီးပြီးနောက်လုပ်ငန်းတာဝန်ဘယ်လောက်ရှိသလဲ။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၏တစ်ဦးအညွှန်းကိန်းအဖြစ်ကျနော်တို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အပေါ်အခြေခံပြီး Cronbach ရဲ့ alpha တွက်ချက် vas, ခြေလှမ်း 1 ဖြင့်တိုင်းတာအဖြစ်ရွံရှာရူးနှမ်း။ လှုံ့ဆော်မှု was.85 related မဟုတ်သောလိင်များအတွက် Cronbach ရဲ့ alpha; နှင့် stimuli.76 related လိင်အဘို့, အရှင်ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌နှစ်ဦးစလုံးအကြေးခွံများယုံကြည်စိတ်ချရကျေနပ်ရှိ၏ ဒါ့အပြင်ကျနော်တို့က4ရွံရှာ Subtype များအတွက် Cronbach ရဲ့ alpha တွက်ချက်: core ကိုရွံရှာ stimuli.76; တိရိစ္ဆာန်-Reminder ရွံရှာ stimuli.74; ကိုယ်ကျင့်တရားရွံရှာ stimuli.53; နှင့်ညစ်ညမ်းရွံရှာ subtype.75 သည်။ ထို့ကြောင့်ဒီလေ့လာမှုမှာအသုံးပြုတဲ့အမျိုးမျိုးသောတာဝန်များကိုများ၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှသာကိုယ်ကျင့်တရားလှုံ့ဆော်မှုအနိမ့်ပြည်တွင်းရေးရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုရှိခြင်းနှင့်အတူကျေနပ်ကြောင်းကောက်ချက်ချနိုင်ပါသည်။
ရွံရှာ propensity နှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုစကေး (DPSS-R) Revised
အဆိုပါ DPSS-R ကိုရွံရှာ propensity (အလားအလာရွံရှာ elicitors မှရွံရှာနှင့်အတူတုံ့ပြန်ရန်ဆိုလိုသည်မှာသဘောထားကို) စရိုက်များနှင့်ရွံရှာ sensitivity ကို (ဆိုလိုသည်မှာ, ရွံရှာကြုံနေရ၏အကဲဖြတ်) စရိုက်များကိုတိုင်းတာနှစ်ခုအတည်ပြု subscales ပါဝင်ပါသည်တစ် 16 ကို item မေးခွန်းလွှာဖြစ်ပါသည် ။ သင်တန်းသားများကို (ဥပမာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖို့ related ကိုယ်ထင်ရှားအာရုံကြုံနေရ၏ကြိမ်နှုန်းအပေါ်တဆယ်ခြောက်ဆိုဖတ်ပါ, '' စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အမှုတို့ကိုငါ့အအစာအိမ်အလှည့်စေ "propensity အဘို့နှင့် '' ငါမောများကဲ့သို့ခံစားရသည့်အခါ 'ငါရွံရှာ feeling ငါ့အဘို့ဆိုးထင်, ဒါဟာငါ့ကို scares" sensitivity ကိုများအတွက်), နှင့်အကောင်းဆုံး 1 ထံမှ = ဘယ်တော့မှအမြဲ5= တစ်စကေးမှာသူတို့ကိုအသုံးချရာညွှန်ပြ။ အဆိုပါ DPSS-R ကိုလေ့လာမှုအတော်များများအတွက်အတည်ပြုခြင်းနှင့်သုံးခဲ့သည်  ထိုသို့မသက်ဆိုင်ဘဲမူလရွံရှာ elicitors ၏ရွံရှာ propensity နှင့်ရွံရှာ sensitivity ကိုတိုင်းတာသောပထမဦးဆုံးညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါသည် ။ အဆိုပါစကေးပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းတသမတ်တည်းဖြစ်ပြထားပြီး  လူအပေါင်းတို့သည်သက်ဆိုင်ရာရွံရှာ domains များအနှံ့ရွံရှာ-ကိုဆွဲထုတ်စမ်းသပ်တာဝန်များကိုအတွက်ရွံရှာကြုံနေရများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တရားဝင်မှုပြသခဲ့သည် ။ ယခင်လေ့လာမှုများအတွက်စကေးဟာ DPSS-R အပေါင်းတို့နှင့် Cronbach ရဲ့ alpha အထက်က၎င်း၏ subscales '' ပြည်တွင်းရေးကိုက်ညီမှုအတူယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ပြခဲ့သည် of.78 , ။ ရွံရှာ propensity အဘို့အရွံရှာ sensitivity ကို was.72 and.75 ဘို့ငါတို့နမူနာခုနှစ်, Cronbach ရဲ့ alpha ။
စိတ်ခံစားမှု Subject Ratings အဖွဲ့
သင်တန်းသားများကို Visual Analogue ကြေးခွံ (VASs) နဲ့နှစ်ခုစာရွက်များပေးခဲ့: task ကို (ခြေလှမ်း 1) ၏အထင်အမြင်ကိုတိုင်းနှင့်တာဝန်ပြီးစီးပြီးနောက်အခြား,4ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ vas သင်ဤအခိုက်မှာဘယ်လိုရွံရှာ feeling နေကြတယ်, သူတို့ရဲ့လက်ရှိခံစားချက်ဥပမာသူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်ဘယ်လောက်ရှိသလဲရည်ရွယ်ခဲ့သလဲ သင်တန်းသားများကိုအလွန် = = မဟုတ်မှာအားလုံးသုညကနေ 10 အရွယ်ရှိတဲ့ vas အပေါ်တစ်ဦးကလောင်အမည်နှင့်အတူအထိမ်းအမှတ်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအကျိုးသက်ရောက်စေသည့်ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းအပိုင်းများကို (ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးမှုများ) ကသွေးဆောင်၏အတိုင်းအတာအဖြစ်, ငါတို့သည်လည်းလိင်စိတ်နိုးထသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တိုင်းတာရန်တစ် vas ပါဝင်သည်။ တစ်သုည = ပြုတော်မသို့မဟုတ် 1 = ပြီးစီးခဲ့နှင့်အတူထို့အပြင်တက်ရောက်လာသူများကို, သူတို့ကအမှန်တကယ်ပြီးစီးရှိမရှိတစ် binary ရမှတ်ကို အသုံးပြု. ညွှန်ပြခဲ့ပါသို့မဟုတ်အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အဆိုပါစမ်းသပ်မှုတစ်လမ်းမျက်နှာပြင်အားဖြင့်စမ်းသပ်မယ့်အခန်းကိုကနေခှဲဝေတိတ်ဆိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာရာအရပျကိုယူ။ သင်တန်းသားများကိုကြီးမားတဲ့အနာဂတ်မျက်နှာပြင် (1.5 × 1.5 မီတာ) ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်နှင့်ပေါ်တွင်တာဝန်များကိုလုပ်ဆောင်သွားရန်သူတို့ကိုများ၏ရှေ့မှောက်၌ဇယားတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်ခဲ့ကြသည်။ စမ်းသပ်ကမိုက်ခရိုဖုန်းကိုကျော်ညွှန်ကြားချက်ပေးခြင်းနေတုန်းအဆိုပါပါဝင်သူစောငျ့ရှောကျဖို့ဖြစ်နိုင်ရှိရာကနေတလမ်း Divide နောက်ကွယ်မှအခန်း၏အခြားဘက်မှာခဲ့ 1-4 လုပ်ပါ။ သင်တန်းသားများကိုသူတို့ခေါ်ဆောင်သွားပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုရန်တောင်းသူတို့မနှစ်မြို့ဖွယ်ကိုရှာဖွေနိုင်သောအရာတို့ကိုမထိသို့မဟုတ်လုပ်ဖို့ကိုမေးမြန်းမည်ဖြစ်ကြောင်းစေခြင်းငှါသောစမ်းသပ်မှုမစတင်မီသတိပေးခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာသူတို့တာဝန်၏ခြေလှမ်း3(အမှန်တကယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချဉ်းကပ် / လုပ်နေတာ) လုပ်ဆောင်သွားရန်, ပြီးတော့သူတို့အမူအကျင့်ကိုပြု၏ဒါမှမဟုတ်သူတို့ငြင်းဆန်လျှင်ရှိမရှိသတင်းပို့ဖို့မဆုံးဖြတ်နိုင်ကပြောကြားခဲ့ကြသည်။ အဘယ်သူမျှမတာဝန်ပြီးစီး (ဆိုလိုသည်မှာခြေလှမ်း3ပြီးပါကမဟုတ်) ၏ဖြစ်ရပ်မှာပါဝင်သူသူတို့အမှန်တကယ်စိတ်ခံစားမှုရူးနှမ်း task ကိုမေတ္တာရပ်ခံလုပ်ဆောင်သွားရန်နှင့်တန်ဖိုးသတ်မှတ်မှုခဲ့ပါလျှင်အဖြစ်စိတ်ကူးဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ အဘယ်သူမျှမပါဝင်သူအဆိုပါရှင်းလင်းချက်ကိုပေးထားခဲ့ပါတယ်တစ်ချိန်ကလေ့လာမှုကနေဆုတ်ခွာဖို့ရွေးချယ်။
လေ့လာမှု၏ဒီဇိုင်းကိုသင်တန်းသားများကိုစိတ်ဓါတ်များသတ်မှတ်ထားဖို့5မိနစ်ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့ရှိတယ်လို့အခိုင်အမာ။ ထို့နောက်မျက်နှာပြင်အေးခဲဖို့ထားသဖြင့်, စမ်းသပ်တဦးတည်းလှုံ့ဆော်မှုအတွက်ယူဆောင်ခဲ့သညျ။ နှစ်ခုတာဝန်များကို (ကအချိန်ကဆိုလိုသည်မှာ, တဦးတည်းနှိုးဆွ) ပြီးနောက်မျက်နှာပြင်အေးခဲဟုသတ်မှတ်ခင်, ရုပ်ရှင်2မိနစ်ဆက်လက်သူတို့2အပြုအမူတာဝန်များကိုအပြည့်အဝထားပြီးစီးခဲ့ကြောင်းသည်အထိ 16 နောက်ဆက်တွဲတာဝန်များကို / လှုံ့ဆော်မှု, ဒါပေါ်မှာတင်ပြခြင်းနှင့်ခဲ့ကြသည် ။ အဆိုပါအမူအကျင့်တာဝန်များ၏ 8 ခြေလှမ်းများ (တစ်ဦးချင်းစီနှိုးဆွဘို့အ4ခြေလှမ်း) ရုပ်ရှင်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မျက်နှာပြင်အေးခဲခဲ့သည်နေတုန်းပြီးစီးကြရသည်။ (- တာဝန်ပြီးစီးပြီးနောက်ခြေလှမ်း 1 နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဘို့အခငျြးခငျြး - တာဝန်များ၏အထင်အမြင်မှာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဘို့တယောက်ခြေလှမ်း 4) တစ်ဦးချင်းစီတာဝန်နှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုတစ်ဦးနှစ်ဦးချောင်-ရွက် rating စာရွက်ပေးအပ်ခဲ့ 16 အလုပ်များကိုအသီးအသီးအဘို့။ အဆိုပါ 16 တာဝန်များကို counterbalanced ခဲ့ကြသည်: အထူးသကျနော်တို့တန်ပြန်ချိန်ခွင်လျှာများအတွက်4ကွဲပြားခြားနားသောအမိန့်ရှိခဲ့ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်စာရွက်အခြေအနေကိုသူတို့ကျပန်းမှခွဲဝေခဲ့အုပ်စု / အမိန့်ဖြင့်ကွဲပြားတဲ့အရေအတွက်ကပေးထားခဲ့သည်။ ယင်းအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များပြီးစီးခဲ့ကြသည်ပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုပုဂ္ဂလိကအတွက်ဖြည့်စွက်ရန်မေးခွန်းအစုတခုပေးထားခဲ့ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တန်းသားများကိုအပြည့်အဝစမ်းသပ်မှုသည်လှုံ့ဆော်မှုများနှင့်အမူအကျင့်တာဝန်များကို၏သဘောသဘာဝ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ပတ်သက်. debriefed ခဲ့ကြသည်။ နောကျဆကျတှဲ S1 သင်တန်းသားများကိုတို့ကရိပ်မိအဖြစ်အမူအကျင့်တာဝန်များကိုသရုပ်ဖော်နှင့်ဘာလှုံ့ဆော်မှုအဖြစ်မှန်အတွက်အခိုင်အမာ။
စေားအတူတူတစ်ဦးကျိုးနွံငွေကြေးဆိုင်ရာဆုကြေးဇူးကိုဆိုလိုသည်မှာ 10 ယူရိုနှင့်အတူသင်တန်းသားများကိုအားပေးပြီးမှခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစမ်းသပ်မှုများအပြည့်အဝကြာချိန်ပါဝင်သူတစ်ဦးလျှင်2နာရီကိုယူ။ ဒီလေ့လာမှုကတက္ကသိုလ် Groningen က၏စိတ်ပညာ Ethical ကော်မတီ, ECP (ECP-code ကို 10336-NE) ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထို့ပြင်စာဖြင့်ရေးသားအသိပေးထားသောသဘောတူခွင့်ပြုချက်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်အားလုံးပါဝင်သူများအနေဖြင့်ရရှိသောခဲ့သည်။
အကျိုးစီးပွား၏ Mood အဖြစ်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ၏ခြယ်လှယ်စစ်ဆေးမှု
အကျိုးသက်ရောက်စေအုပ်စုတစ်စုနှုန်းသွေးဆောင်၏ခြယ်လှယ်စစ်ဆေးမှုများအဖြစ်ကျနော်တို့အုပ်စုတစု (လိင်စိတ်နိုးထ, အပြုသဘော arousal နှင့်ကြားနေ / အခြေခံ) မှာပေါ်အတိုး၏သွေးဆောင်ခံစားချက်အဖြစ်လိင်စိတ်နိုးထများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ကှဲလှဲ၏တစ်လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) ကောက်ယူ တင်ပြတာဝန်များ၏အထင်အမြင်, အဆင့် 1 ။ ဒါကသွေးဆောင်သည့်စိတ်ဓါတ်များ (တစ်ဦးချင်းစီတာဝန်၏ခြေလှမ်း 16) ပြီးစီးခဲ့ခံရဖို့ခဲ့သော 1 တာဝန်များကိုတစ်လျှောက်လုံးထိရောက်သောခဲ့ရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ လိင်စိတ်နိုးထ ratings အပေါ်3အုပ်စုများအကြားသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်ခဲ့သည် F(2, 87) = 12.71, p<.01 ။ LSD စစ်ဆေးမှုများကို အသုံးပြု၍ စိတ် ၀ င်စားခြင်း၏တရားဝင်မှုကို LSD စစ်ဆေးမှုမှတွေ့ရှိချက်အရလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုသည်ကြားနေအုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှု (M = 1.4, SD = 1.0) တွင်ပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် (M = .53, SD =) .82, p<.01) နှင့်အပြုသဘောနှိုးဆော်သံအုပ်စုတစ်စု (M = .40, SD ကို = .59, p<.01) ။
အဆိုပါ DPSS-R ကိုတိုင်းတာ propensity နှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုစက်ဆုပ်ရွံရှာတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေ
ရွံရှာ sensitivity ကို (DPSS-sensitive) စရိုက်များသို့မဟုတ် / နှင့်ရွံရှာ propensity (DPSS-propensity) စရိုက်များနှင့် ပတ်သက်. အတူသုံးအုပ်စုများ၏နှိုင်းယှဉ်အတည်ပြုရန်ကျနော်တို့ကဤ variable တွေကိုအပေါ်အုပ်စုတစ်စု ANOVA အကြားတစ်ဦးပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အုပ်စုများကိုဖြတ်ပြီး, ဤရွံရှာကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များအပေါ်ရမှတ်တစ်ခုညီမျှဖြန့်ဖြူးထောက်ပံ့, ရိုရွံရှာ sensitivity ကိုအပေါ်3အုပ်စုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိကြ၏ F(2, 87) = 1.79, p = .2, η = .04 သို့မဟုတ်ရွံရှာ propensity စရိုက်များ F(2, 87) = .95, p> .4, η = .02 ။ အဆိုပါ DPSS-Sensitivity အပေါ်နည်းလမ်း 9.2, 8.9 နှင့် 10.8 ရှိ။ , DPSS-Propensity တွင်လိင်မှုနှိုးဆွမှု၊ အပြုသဘောနှိုးဆွမှုနှင့်ကြားနေအုပ်စုအတွက် ၁၆.၆၊ ၁၆.၃ နှင့် ၁၅.၄ တို့ဖြစ်သည်။
non-လိင် Related လှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လိင်နှင့်အတူရွံရှာဘွယ်၏ထုတ်ယူခံစားချက်အပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
3 အုပ်စုသည် (လိင်စိတ်နိုးထ, အပြုသဘော arousal နှင့်ကြားနေ) နဲ့တစ်ဦးရောနှော ANOVA ကြား-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်2အမျိုးအစား (Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန် vs. related လိင်) ×အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်သည်အတိုင်း, ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည် လိင်နှင့် Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုအပေါ်ရွံရှာ၏အမြင်အပေါ်ခံစားချက်သော induction ။ အုပ်စုတစ်စု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် F(2, 87) = 4.52, p<.01, η = .09 နှင့်စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအမျိုးအစား၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု F(1, 87) = 4.98, p<.05, η = .05 ။ သို့သျောလညျး, ဒီအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုများလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစား * အုပ်စုတစ်စု၏သိသိသာသာအပြန်အလှန်အားဖြင့်အရည်အချင်းပြည့်မီခဲ့ကြသည် F(2, 87) = 4.63, p<.01, η = .10 ။
နောက်ထပ်ဒီအပြန်အလှန်ဝေါဟာရကိုဆနျးစစျဖို့, ငါတို့နှစ်ဦးကိုတဦးတည်း-လမ်း ANOVA ရဲ့လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုနှင့် Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအတှကျအရွံရှာ ratings ပေါ်တွင်သုံးအုပ်စုများနှိုင်းယှဉ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများအတွက် ratings နှင့်အတူပထမဦးဆုံး ANOVA အုပ်စုများအကြားသိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ပြသ F(2, 87) = 6.35, p<.01 ။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအုပ်စုတွင်ပါဝင်သူများသည်လိင်မှုနှိုးဆွသောလှုံ့ဆော်မှုများကိုအပြုသဘောနှိုးဆွမှုအုပ်စုထက်သိသိသာသာလျော့နည်းစေသည် (M-diff = -1.22, SD = .44) p<.01) နှင့်လည်းကြားနေအုပ်စုထက်လျော့နည်းရွံရှာဘွယ်သော (M-diff = -1.47, SD ကို = .44, p<.01) ။ အပြုသဘောနှိုးဆွမှုနှင့်ကြားနေအုပ်စုအကြားအဓိပ္ပါယ်ရှိသောခြားနားချက်မရှိပါ (p = .58) ။ အုပ်စုခြားနားချက်စာရင်းအင်းအရေးပါမှု၏သမားရိုးကျအဆင့်ကိုမရောက်နိုင်ဘူးသော်လည်း non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူဒုတိယ ANOVA ခုနှစ်တွင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပုံစံအလွန်ဆင်တူခဲ့သည် F(2, 87) = 2.86, p = .06 ။ သို့သျောလညျး, LSD စမ်းသပ်မှုသုံးပြီးနှိုင်းယှဉ်သည့်လိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုတွင်သင်တန်းသားများကိုကြားနေထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (က M-ကွဲပြားမှု = -1.06, SD က = .46 ထက်လျော့နည်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အဖြစ် non-လိင်လှုံ့ဆော်မှု rated ကြောင်းညွှန်ပြတွဲ p<.05) ။ အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ် စားပွဲတင် 2, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်အပြုသဘော arousal အုပ်စုတစ်စုအကြားခြားနားချက် (အရေးပါမှုကိုမရောက်နိုင်ဘူးp = .57) နှင့်မအပြုသဘော arousal နှင့်ကြားနေထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည် (အကြားခြားနားချက်ကိုပြု၏p = .08) ။ နောကျဆကျတှဲ S2 အုပ်စုတစုလျင် 16 အပြုအမူအလုပ်များကိုအသီးအသီးအဘို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွံရှာ ratings ၏နည်းလမ်းပြခြင်း, တွေ့ရှိချက်များ၏ပုံစံအားလုံးတာဝန်များကိုဖြတ်ပြီးအလွန်အမင်းတသမတ်တည်းခဲ့ကြောင်းပြသထားတယ်။
စားပွဲတင်2။ (တာဝန်ပြီးနောက် vs. မတိုင်မီ) တိုင်းတာခြင်းများရိပ်မိအုပ်စုတစ်စု၏တစ်ဦး function ကိုအဖြစ်ထုတ်ယူရွံရှာ၏အဆငျ့, စီးပွားရေးနှိုးဆွမှုအမျိုးအစားနှင့်အချိန်။
ဒေါင်းလုပ်: PowerPoint ဆလိုက် | ပိုကြီးတဲ့ပုံရိပ် (25KB PNG) | မူရင်းပုံရိပ် (69KB TIFF)
Differential စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် Subtype ထံမှစက်ဆုပ်ရွံရှာ၏ထုတ်ယူခံစားချက်အပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု
3 အုပ်စုသည် (လိင်စိတ်နိုးထ, အပြုသဘော arousal နှင့်ကြားနေ) နဲ့တစ်ဦးရောနှော ANOVA ကြား-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်4အမျိုးအစား (core ကို, တိရစ္ဆာန်-Reminder, ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားရွံရှာ) ×အတွင်း-ဘာသာရပ်အချက်အဖြစ်, ခံစားချက်များ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်နိုင်ရန်ကောက်ယူခဲ့သည် လေးပါးကွဲပြားခြားနားသောရွံရှာ Subtype ကနေရူးနှမ်းရွံရှာ၏ခံစားခကျြအပျေါသော induction ။ အုပ်စုတစ်စု၏သိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် F(2, 87) = 3.34, p<.05, η = .07 နှင့်ရွံရှာဘွယ်သောအမျိုးအစား၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှု F(3, 85) = 49.64, p<.01, η = .36 ။ သို့သော်အမျိုးအစား * အုပ်စုနှင့်သိသိသာသာအပြန်အလှန်မျှမရှိ F(6, 172) = 1.0, p = 42, η = .02 ဤအရပ်, အုပ်စုတစ်စု၏ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာရွံရှာ Subtype အားလုံးအတှကျအလားတူဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ4Subtype များအတွက်နည်းလမ်းများ၏ပုံစံတိရိစ္ဆာန်-Reminder ရွံရှာမှာပြထားတဲ့အတိုင်း core ကို, ညစ်ညမ်းမှုများနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားရွံရှာလှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်, အမြင့်ဆုံးရွံရှာ ratings ရူးနှမ်းကြောင်းညွှန်ပြ စားပွဲတင် 3.
စားပွဲတင်3။ ရွံရှာ Subtype နှုန်းရွံရှာ၏ထုတ်ယူခံစားချက်တွေကိုအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏သက်ရောက်မှု။
ဒေါင်းလုပ်: PowerPoint ဆလိုက် | ပိုကြီးတဲ့ပုံရိပ် (35KB PNG) | မူရင်းပုံရိပ် (96KB TIFF)
အဆိုပါအမှန်တကယ်ချဉ်းကပ်အပြုအမူအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏သက်ရောက်မှုနှင့် Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်
ဤတွင်ကျနော်တို့ပြီးစီးခဲ့အလုပ်တခုကို၏ရာခိုင်နှုန်းအပေါ်3အုပ်စုသည် (ကြားနေ vs. အပြုသဘော arousal vs. လိင်စိတ်နိုးထ)2အမျိုးအစား× (Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကို vs. related လိင်) နှင့်အတူတစ်ဦးကထပ်ခါတလဲလဲအတိုင်းအတာ ANOVA ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးအစား * အုပ်စု Wilkes အကြားမျှသိသာအပြန်အလှန်ရှိခဲ့သည် λ = .98, F(2, 87) = .79, p = .46, η = .02 ။ အလုပ်တခုကိုအမျိုးအစား Wilkes ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မရှိခဲ့သည် λ = .97, F(1, 87) = 2.10, p = .15, η = .02 ။ သို့သော်အုပ်စုသိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည် F(2, 87) = 7.71, p<.01, η = .15 ။ ခန့်မှန်းချက်များအရ LSD စစ်ဆေးမှုများကို အသုံးပြု၍ တွဲနှိုင်းယှဉ်ခြင်းကလိင်မှုနှိုးဆွမှုအဖွဲ့သည်ကြားနေအုပ်စုထက်သိသိသာသာအလုပ်များကိုပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (M-diff = 16.76, SD = 5.76, p<.01) နှင့်အပြုသဘောနှိုးဆွအုပ်စုတစ်စု (M-diff = 21.53, SD ကို = 5.76, p<.01) ။ အပြုသဘောနှိုးဆွအုပ်စုသည်ကြားနေအုပ်စု (M-diff = -4.77, SD ကို = 5.76, ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိပါ။ p> .05) ။ လိင်ဆိုင်ရာစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောအလုပ်များနှင့်လိင်မဟုတ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်အရလိင်စိတ်နှိုးဆွမှုအဖွဲ့သည်အခြားအုပ်စုနှစ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အမြင့်ဆုံးအလုပ်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ လိင်ဆက်ဆံမှုအတွက်တာဝန်များမှာလိင်မှုနှိုးဆွမှု၊ အပြုသဘောဆောင်သောနှိုးဆွမှုနှင့်ကြားနေအုပ်စုများအတွက် ၈၃.၃၃%၊ ၆၅.၃၃% နှင့် ၇၄.၀၁% တို့ဖြစ်သည်။ အလားတူစွာလိင်မဟုတ်သောလုပ်ငန်းများအတွက်လိင်မှုနှိုးဆွမှု၊ အပြုသဘောဆောင်သောနှိုးဆွမှုနှင့်ကြားနေအုပ်စုများအတွက် ၈၄.၉၅%၊ ၆၅.၉၀% နှင့် ၆၆.၇၇% တို့ဖြစ်သည်။
လိင်စိတ်နိုးထ Task ကိုစွမ်းဆောင်ရည်ပြီးနောက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အတွက်လျှော့ချရေး modulates
သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထဒါ့အပြင်အမှန်တကယ်တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအောက်ပါရွံရှာ၏ခံစားချက်များကိုအတွက်လျော့ချရေး modulates ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့3×2အမျိုးအစား (Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလုပ်ငန်းတာဝန်များကို vs. related လိင်) ×တစ်2အုပ်စုသည် (လိင်စိတ်နိုးထ, အပြုသဘော arousal, ကြားနေ) ကောက်ယူ အချိန်ထုတ်ယူရွံရှာအပေါ် (Pre တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်, post ကိုတာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်) ရောထွေး ANOVA ။ အချိန်တစ်ဦးကအဓိကသက်ရောက်မှုကိုသတိပြုခဲ့သည် F(1, 87) = 10.6, p<.01, η = .11 ခြုံငုံအလုပ်စွမ်းဆောင်ရည် post မှကြိုတင်ကနေရူးနှမ်းရွံရှာအတွက်တိုးရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြ။ သို့သော်အချိန် * အုပ်စုတစ်စုအပြန်အလှန်မရှိ F(1, 87) = .71, p = .49, η = .02 ။ ထို့ကြောင့်ဤအကျိုးသက်ရောက်မှုလိင်စိတ်နိုးထယေဘုယျအားဖြင့်တာဝန်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအောက်ပါရွံရှာ၏ခံစားချက်များကိုရသဏ္ဍာန်ကြောင်းအကြံပြုစရာသက်သေအထောက်အထားများနှင့်အတူသုံးယောက်အုပ်စုများအားလုံးအတှကျအလားတူဖြစ်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်အချိန်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှစ်ဦးစလုံးအလုပ်တစ်ခုကိုအမျိုးအစားများကိုဖြတ်ပြီးကွဲပြား F(1, 87) = 7.35, p<.01, η = .08 ။ ဤသည်ကယေဘုယျအားဖြင့်ကြိုတင်ပြီးအလုပ်တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများအားရွံရှာခြင်းအားဖြင့်လိင်မဟုတ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသောလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြသည် t(89) = 3.81, p<.001, η = .02 ။ အုပ်စုနှင့် ၃ ခုကြားလှုံ့ဆော်မှုအမျိုးအစားနှင့်အချိန်အကြားအပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအပါအဝင်အခြားအဓိကနှင့်အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမရှိခြင်း။ ရလဒ်များ၏ဤပုံစံသည်ကန ဦး အမြင်အားမထောက်ခံခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
လက်တွေ့ကိုင်တွယ်မှု (C, အမူအကျင့်ဆိုင်ရာတာဝန်) အတွင်းချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူအပေါ်စမ်းသပ်ခြယ်လှယ်မှု (A, လိင်စိတ်နှိုးဆွအုပ်စု၊ ကြားနေနှင့်အပြုသဘောနှိုးဆွအုပ်စုနှစ်ခုလုံးနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်) ၏သက်ရောက်မှုသည်စမ်းသပ်မှုဆိုင်ရာရွံရှာဖွယ်အပြောင်းအလဲများမှကမကထပြုထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးရန် -disgust) ကျွန်ုပ်တို့သည်ယူဆချက်စစ်ဆေးခြင်းအတွက် linear linear ဆုတ်ယုတ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် (A> C, A> B, B> C)၊ (B, C) နှင့်အမျိုးမျိုးသောဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု (B, C) နှင့် ပြုလုပ်၍ (ခ) ၏ဖျန်ဖြေခြင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစမ်းသပ်ခဲ့သည်။ ။ အတွက်ရုပ်ပြအဖြစ် ပုံ 1ဆဲတစ်မူထူးခြားတဲ့သိသိသာသာအလှူငွေ, (β = .28 အောင် (ခ) နဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖျန်ဖြေများအတွက်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိ၏ p<.005) နှစ် ဦး စလုံး (A နှင့် B) ကိုညီမျှခြင်းတွင်ထည့်သွင်းခဲ့ကြသည့်အခါ။ ထို့ကြောင့်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူအပေါ်သွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ၏သက်ရောက်မှုကိုအပြည့်အဝပုဂ္ဂလဒိive္ရွံရှာအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့မခံခဲ့ရပါဘူး။ ထို့ကြောင့်ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂလဒိive္ရွရွရွရွရွများပြောင်းလဲခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွမှု၏လွတ်လပ်သောရလာဒ်များဖြစ်သည်။
ပုံ 1 ။ Self-အစီရင်ခံရွံရှာ၏စေ့စပ်ဖြန်ဖြေသက်ရောက်မှုစမ်းသပ်။
ဒဏ္ဍာရီ [တစ်] (ကြားနေနှင့်အပြုသဘောဆောင်သည့်နှစ်ဦးစလုံး arousal အုပ်စုကိုနှိုင်းယှဉ်လိင်စိတ်နိုးထအုပ်စု) ကိုစမ်းသပ်ကိုင်တွယ်သရုပ်ဖော်; [ကို C] ကအပြုအမူတာဝန်များကိုကိုယ်စားပြုပြီး [B က] ကအမြင်အာရုံ analogue စကေး (vas) ရက်နေ့တွင်တိုင်းတာအဖြစ်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွံရှာပြသ; βဟာ beta ကိုတနျဖိုးသည်နှင့် p စာရင်းအင်းအရေးပါမှုအဆင့်အထိဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါင်းလုပ်: PowerPoint ဆလိုက် | ပိုကြီးတဲ့ပုံရိပ် (24KB PNG) | မူရင်းပုံရိပ် (72KB TIFF)
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကလိင်စိတ်နိုးထသော induction ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု Self-အစီရင်ခံရွံရှာလွယ်ကူစွာထိခိုက် (ဆိုလိုသည်မှာ, ရွံရှာ propensity) ၏အဆင့်အညီကွဲပြားကြလိမ့်မယ်ရှိမရှိ, စူးစမ်း။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးကို linear Regression သည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွံရှာခြင်းနှင့်ပြီးစီးခဲ့အပြုအမူအလုပ်များကိုရာခိုင်နှုန်း၏ခန့်မှန်းချက်အဘို့ဒုတိယခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရူးနှမ်းကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပထမဦးဆုံးဆန်းစစ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အုပ်စုပါဝင်သည်နှင့်ပထမဦးဆုံးအဆင့်မှာ DPSS-propensity ရွံရှာစရိုနှင့်ဒုတိယအဆင့်ကိုအတွက်ကျနော်တို့ကအပြန်အလှန်သက်တမ်း (Group မှ * စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ရို) ပါဝင်သည်။ ပထမဦးဆုံးဆန်းစစ် DPSS-propensity ၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်အရေးပါမှု၏သမားရိုးကျအဆင့် (β = .40, ရောက်ရှိခဲ့သည်ကွောငျးဖျောပွခဲ့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အညီ p = .02) ။ အဆိုပါအပြန်အလှန်သက်တမ်း (Group မှ * စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ရို) (မော်ဒယ်မှသိသိသာသာအထောက်အကူမပြုခဲ့နေတုန်းဒုတိယခြေလှမ်းအတွက် DPSS-propensity အရေးပါမှုကိုထိန်းသိမ်းထားp = .49) ။ အရှင်ရုပ်ရှင်ခြယ်လှယ်များ၏လွတ်လပ်သောဟောကိန်းများ, နှင့်အညီ, မြင့်သောရိုရွံရှာသင်တန်းသားများကိုတင်ပြတာဝန်များကိုစဉ်အတွင်းပိုပြီးရွံရှာနှင့်အတူယေဘုယျအားဖြင့်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အလားတူပဲကျနော်တို့ချဉ်းကပ်မှုအပြုအမူအပေါ်ရိုရွံရှာ (ဆိုလိုသည်မှာ DPSS-propensity) ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစမ်းသပ်ဖို့ဒုတိယဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းမှာ DPSS-propensity အရေးပါမှု၏သမားရိုးကျအဆင့် (β = -4.9, ရောက်ရှိခဲ့သည် p = .04) ကိုအပြန်အလှန်သက်တမ်း Group မှဒုတိယခြေလှမ်းအတွက်နေတုန်း * စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဉာဉျဆိုး (အရေးပါမှုကိုမချဉ်းမကပ်ခဲ့ဘူးp = .11) ။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်မြင့်မားသောရွံရှာရိုသင်တန်းသားများကိုအမှန်တကယ်လျော့နည်းအပြုအမူတာဝန်များကိုပြီးစီးခဲ့ကြောင်းဖော်ပြသည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအဓိကတွေ့ရှိချက်အကျဉ်းချုံးနိုင်ပါတယ်: ပထမဦးဆုံး, အလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုတစ်စုအဖြစ်သိသိသာသာလျော့နည်းစက်ဆုပ်ရွံရှာသည့်ကြားနေအုပ်စုနှင့်အပြုသဘောဆောင် arousal အုပ်စုနှစ်ခုလုံးကိုနှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ အလားတူ (Non-သိသိသာသာ) လမ်းကြောင်းသစ် non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်ထင်ရှားခဲ့သည်။ ဒုတိယ, လိင်နှင့် Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုနှစ်ဦးစလုံးအဘို့, လိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုသည်လိင်စိတ်နိုးထအမှန်တကယ် accentuates ကြောင်းညွှန်ပြ, အလုပ်များကိုအမြင့်ဆုံးရာခိုင်နှုန်းကောက်ယူ အမှန်တကယ် စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုကိုဦးတည်ချဉ်းကပ်မှုသဘောထားကို။
အထူးလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုသည်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အခါဟောကိန်းများနှင့်အညီ, ဤအုပ်စုတွင်လျှော့ချပြသလှုံ့ဆော်မှုစက်ဆုပ်ရွံ့ရှာဘွယ်သော (related non-လိင်အတွက်လည်းနှင့်အချို့သောအတိုင်းအတာအထိ) ကိုလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောဆီသို့ဦးတည်ရွံရှာရူးနှမ်း။ ရွံရှာအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုအထူးသဖြင့်အမူအကျင့်အဆငျ့မှာသက်ရောက်မှုသည်, လိင်စိတ်နိုးထခွအေနအေမှကန့်သတ်ခဲ့ပေးတစ်ခုတည်းကိုသာအပြုသဘော arousal မှစွပ်စွဲမရနိုင်ပါ။ ဤရလဒ်သည်အထီးသင်တန်းသားများနှင့်အတူကောက်ယူယခင်လေ့လာမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူအရတော့များမှာ ။ ယခင်လေ့လာမှုအတွက်ဆိုးကျိုးများလိင်တိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းကြောင်းလှုံ့ဆော်မှုစက်ဆုပ်ရွံရှာဖို့ကန့်သတ်ခံခဲ့ရသော်လည်း, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာသွေးဆောင်လိင်စိတ်နိုးထ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတိုက်ရိုက်လိင်ရည်ညွှန်းမလှုံ့ဆော်မှုများအတွက်လည်းထင်ရှားခဲ့ပါတယ်, နောကျဆကျတှဲ S2။ Stevenson နဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်လိင်စိတ်နိုးထထုတ်ယူနိုင်ရန်ရုပ်ရှင်ကလစ်အစားဆလိုက်အသုံးပြုသောအဖြစ်လေ့လာမှုများအကြားဒီအသိသာခြားနားချက်ဖြစ်ကောင်းစမ်းသပ်ကိုင်တွယ်များ၏ပြင်းထန်မှုမှစွပ်စွဲနိုင် .
လက်ရှိလေ့လာမှုအမျိုးသမီးလိင်စိတ်နိုးထအထူးစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုများထုတ်ယူရွံရှာ attenuates, ယောက်ျားဆင်တူကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများတင်ပြ ။ အရေးကြီးတာက, သို့သော်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်မျှသာလိင်စိတ်နိုးထကိုလည်းသင်တန်းသားများကို '' အပြုအမူအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အမှန်တကယ်ချဉ်းကပ်လိုတဲ့သဘောထားကို attenuates ကြောင်းသရုပ်ပြမှတဆင့်ဖျောပွလေ့လာမှုများ၏ Self-အစီရင်ခံစာ data တွေကိုပုံတူထက်ထပ်မံသွားပါ။ တပုဂ္ဂလဒိဋ္ Self-အစီရင်ခံရွံရှာယင်းတာဝန်များကိုချဉ်းကပ်ခြင်းနှင့်လုပ်ဆောင်သွားရန်ဖို့စိတ်အားထက်သန်အပေါ်စမ်းသပ်ခွအေနအေ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖျန်ဖြေတော်မမူကြောင်းစဉ်းစားတဲ့အခါဒီဒီမှာအထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပုံရသည်။ ဤသည်လိင်စိတ်နိုးထရွံရှာ၏အတွေ့အကြုံပေါ်နှင့်ရွံရှာ-သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့လူရဲ့စိတ်သဘောထားအပေါ်တစ်ဦးအများအားဖြင့်လွတ်လပ်သောသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိဟန်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အဆိုပါလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုတွင်သင်တန်းသားများကိုကြားနေထိန်းချုပ်မှုအုပ်စုသည်ထက်လျော့နည်းစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်အဖြစ် non-လိင်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှု rated, ဖြစ်သော်လည်း, ထိုကဲ့သို့သောကွာခြားချက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal- နှင့်အပြုသဘော arousal အုပ်စုတစ်စုအကြားပျက်ကွက်ခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွံရှာအပေါ်လိင်ရုပ်ရှင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအဓိကအားဖြင့်အတူတူပင်လိင်ရုပ်ရှင်၏ယေဘုယျအားဖြင့်နှိုးဆွသောဂုဏ်သတ္တိများမောင်းနှင်ကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ Non-လိင်ရွံရှာ elicitors ၏ကြေးဇူးတငျကွောငျးအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကပိုက၎င်း၏ယေဘုယျအားဖြင့် (လိင်အားဖြင့်မောင်းနှင်စေခြင်းငှါသော်လည်းထို့ကြောင့်လိင်၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်အပေါ်လိင်ရုပ်ရှင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာရွံရှာ elicitors, လိင်စိတ်နိုးထထုတ်ယူနိုင်ရန်ယင်း၏တိကျတဲ့တန်ခိုးတော်အားဖြင့်မောင်းနှင်စေခြင်းငှါ လွတ်လပ်သော) ဂုဏ်သတ္တိများနှိုးဆွသော။ ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကို (မ non-လိင်များအတွက်သင်တန်းသားများပေါ်လိင်ရုပ်ရှင်၏သက်ရောက်မှုက 'လိင်ဆီလျှော် arousal ရုပ်ရှင်သင်တန်းသားများကိုမထိခိုက်ခဲ့ဘူးအဖြစ်လိင်၏အမှန်တကယ်ချဉ်းကပ်သက်ဆိုင်ရာများနှင့်လိင်ဆီလျှော်ရွံရှာ elicitors အထူးသ, လိင်စိတ်နိုးထထုတ်ယူနိုင်ရန်၎င်း၏တန်ခိုးတော်အားဖြင့်မောင်းနှင်ပုံ' ' မလိင်သက်ဆိုင်ရာစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုများအတွက်) ။ အတူတူတွေ့ရှိချက်မသာ၏ပစ္စုပ္ပန်ပုံစံခံစားချက်တွေကိုနှင့်ရွံရှာ၏ရှောင်ရှားခြင်း (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း) လွတ်လပ်သောဖြစ်ရပ်ကိုယ်စားပြုကွောငျးဖျောပွသောကြောင့်လည်းသူတို့ differential လိင်စိတ်နိုးထလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပစ္စုပ္ပန်အခြေအနေတွင်များအတွက်အရေးအပါဆုံး, တွေ့ရှိချက်များကိုပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွံရှာအပေါ်လည်းရွံရှာ-သွေးဆောင်ရှောင်ရှားခြင်းအပေါ်ကြီးထွားလိင်စိတ်နိုးထများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုနှစ်ဦးစလုံးပျြောမှေ့စလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုလွယ်ကူချောမွေ့ရန်လမ်းအတွက်ပြုမူမည်နှစ်ခုထဲကတစ်ခုလျှင်ပြဿနာဖြစ်နိုင်သည်ကိုညွှန်ပြ လိင်စိတ်နိုးထလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ်ပြုပြင်ထားသောမပေးပါ။
တစ်ဦးလက်တွေ့ရှုထောငျ့မှဤတွေ့ရှိချက်များကရွံရှာခြင်းနှင့်ရွံရှာ related ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကို၏လျှော့ချရေးကိုတားဆီးဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ် (မသင့်လျော်ဆွဖို့ဖြစ်ကောင်းကြောင့်) လိင်စိတ်နိုးထ၏မရှိခြင်း, functional ဖြစ်စေလိင်နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မည်အကြောင်းညွှန်ပြနိုင်ပါတယ်။ လိင်စိတ်နိုးထ (ဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းရင်းများအမျိုးမျိုးအတွက်) အနိမ့်လျှင်အကျိုးဆက်, တိကျတဲ့ပျြောမှေ့စလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာနေသောလှုံ့ဆော်မှု, အဖြစ်ကဤလှုံ့ဆော်မှုချဉ်းကပ်ဖို့မဆိုင်းမတွ၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ဂုဏ်သတ္တိများ attenuation မရှိကြပေ။ ရလဒ်အနေနဲ့ကဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်အလှည့်များတွင်ပွတ်တိုက်အားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောလိင်ဆက်ဆံမှုနှင့်အတူနာကျင်မှုကိုအဖြစ်ပြဿနာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည့်အင်္ဂါဇာတ်ချောဆီအရည်ကြည်, မရှိခြင်းနှင့်အတူပြဿနာများဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်။ ဒါဟာအစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်ထိုမိန်းမသည်လိင်နှင့်အတူအနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့များဆည်းပူးစေခြင်းငှါ, နှင့်လုံးဝလိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်စတင်အံ့သောငှါ, အရှင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဤသက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်း, အမျိုးသမီးများနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှုများခံစားနေရပြီး vaginismus (Genito-တင်ပါးဆုံတွင်းနာကျင်ကိုက်ခဲရောဂါ / ထိုးဖောက်မှုရောဂါ) သူတို့ကပုဂ္ဂလဒိဋ္မှာအဖြစ်တစ်ဦးထက်ပိုအလိုအလျှောက်အဆင့်မှာခေါ်ဆောင်သွားဆွဆီသို့ဦးတည်ရွံရှာတုံ့ပြန်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားကြောင်းပြသကြ , ။ ထိုမှတပါး, လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုံ့ဆော်မှု vaginismus ခံစားနေရပြီးအမျိုးသမီးရွံရှာခြင်းထက် arousal ထုတ်ယူအားထင်ရှားဆိုတဲ့အချက်ကိုထပ်မံပြဿနာကိုပိုမိုဆိုးဝါးလာစေလိမ့်မယ်။ ရွံရှာဖို့ပုံမှန်တုံ့ပြန်မှုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်အကွာအဝေးကိုဖန်တီးနိုင်ရန်အတွက်ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကဒီကဒီမှာသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ဤလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများအကျိုးဆက်အဖြစ်အောက်ဖက်လိမ်နှင့်၎င်းတို့၏အခက်အခဲများ၏ဆက်လက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့ရွံရှာ၏ထုတ်ယူပိုမိုအခန်းပေးသောအနိမ့်လိင်စိတ်နိုးထဖို့ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်ဆက်စပ်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုအလွန်အမင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရွံရှာ-သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများ၏လူတွေရဲ့ရှောင်ရှားခြင်း၏လိင်-arousal-သွေးဆောင်လျှော့ချရေးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုဖို့ကန့်သတ်ဒါပေမယ့်လည်းယေဘုယျအားဖြင့်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုသက်ဆိုင်ကြောင်းပိုမိုယေဘုယျဖြစ်စဉ်ကိုထင်ဟပ်ဟန်မခံခဲ့ရပါဘူး။ လိင်စိတ်နိုးထအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားကိုဖြတ်ပြီးအတော်လေးဆင်တူသောရလဒ်နောက်ထပ်လိင်စိတ်နိုးထ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှု (လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောရွံရှာလှုံ့ဆော်မှုသို့မဟုတ်ရွံရှာ၏အခြားမည်သည့်မျိုးကွဲဖို့ကန့်သတ်မပါ) တစ်ဦးထက်ပိုသောယေဘုယျဖြစ်စဉ်ကိုထင်ဟပ်သောနိဂုံးချုပ်မျဉ်းတား။
(လိင်စိတ်နိုးထသော induction အောက်ပါ) ကိုစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုမှအမှန်တကယ်ထိတွေ့ပြီးနောက် (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ရွံရှာ၏ကျဆင်းခြင်းမရှိခြင်းလေ့နှုန်းအပေါ်မျှအပိုဆောင်းသက်ရောက်မှုရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြနိုင်ဘူး။ သို့ရာတွင်ထိုသို့ကြောင့် Starting Point သို့ရောက်ပြီရွံရှာ၏ကနဦးခံစားချက်တွေကိုအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထများ၏အားနည်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ, အခြေအနေများအကြားခြားနားချက်ဟာလိင်စိတ်နိုးထအုပ်စုတွင်ထပ်မံလျှော့ချရေးတို့အတွက်လျော့နည်းအခန်းထဲမှာကျန်ရစ်ပြီးသားရှိကွောငျး။ သတိပြုသင့်ပါတယ်
တချို့ကကန့်သတ်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ရပါမည်: ငါတို့သည်လုံးဝသင်တန်းသားများကို '' လိင်စိတ်နိုးထ၏ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings အပေါ်မှီခိုခဲ့ကြကျွန်တော်တို့ရဲ့စမ်းသပ်ကိုင်တွယ်များ၏ထိရောက်မှုကိုအတည်ပြုရန်; ဒီရုပ်ရှင်ကလစ်ကိုလည်းပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်စိတ်နိုးထအပြင်ဇီဝကမ္မ arousal ဆွဲထုတ်ခြင်းအောင်မြင်သည်ဖြစ်စေကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ပါလိမ့်မယ်။ တင်းကြပ်စွာက test- နှင့်စမ်းသပ်တောင်းဆိုချက်တွေဟာသူတို့ရဲ့လိင်စိတ်နိုးထ ပတ်သက်. ကိုင်တွယ်စစ်ဆေးမှုများဆိုတဲ့မေးခွန်းကို၏သင်တန်းသားများကို '' ratings အတွက်အခန်းကဏ္ဍကစားကြအံ့သောငှါထွက်အုပ်ချုပ်ရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိဒီဇိုင်းအတွက်, စကားပြောဘာလို့လဲဆိုတော့တစ်ဦးကဇီဝကမ္မအတိုင်းအတာ (ဥပမာအင်္ဂါဇာတ် photoplethysmograph) သင့်လျော်သောပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဒီအမူအကျင့်အဆင့်မှာအထူးလိင် arousal အုပ်စုတစ်စုလျော့နည်းရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတစ်ခုဝယ်လိုအားရှင်းပြချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုလိမ့်မည်ပြဆိုတဲ့အချက်ကိုအဖြစ်, မဖြစ်နိုင်စဉ်းစားနိုင်ပါသည်။
ထို့အပွငျ, ဒီလေ့လာမှုလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုကိုရည်ညွှန်းသည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကျနော်တို့ related လိင်အဖြစ်ဖျောညှနျးအမှန်တကယ်လက်ရှိပါဝင်သူများ၏အမြင်ထဲမှာ Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ကွဲပြားလျှင် Non-လိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တာဝန်များကိုမှကျနော်တို့လုံးဝသေချာမဖွစျနိုငျပေမဲ့ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ (Non-လိင်သက်ဆိုင်ရာ vs. ) ။ သို့သျောလညျးကနဲ့ကြီးမားတဲ့ပါဝင်သူတစ်ဦးလွတ်လပ်သောအုပ်စုတစ်စု၏ ratings non-လိင်သက်ဆိုင်ရာအမျိုးအစားနှိုင်းယှဉ်သက်ဆိုင်ရာလိင်အတွက်ပစ္စုပ္ပန်ဌာနခွဲများ၏တရားဝင်မှုအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါဟာနေဆဲတာဝန်ရှင်းရှင်းလင်းလင်း (non-လိင်အမျိုးအစားဖို့တာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ကြောင်း) အခွားလှုံ့ဆော်မှုအနေဖြင့်ဖော်ပြခဲ့သည်လိင်ဆက်စပ်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌စဉ်နဲ့ကွဲသွားခဲ့ရတယ်တဲ့ pedophile ဝတ်ဆင်တဲ့ရှပ်အင်္ကျီကိုရည်ညွှန်းကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခံရသင့်ပါတယ်ပေမယ့်။ ထို့ကွောငျ့ကြှနျုပျတို့သညျဤအထူးတာဝန်မရှိဘဲဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း re-သို့ပွေးလေ၏။ ဒီတာဝန်ကိုဖယ်ရှားခြင်းဟာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏ရလဒ်ကိုမအဓိပ္ပါယ်ရှိသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာမဖြစ်နိုင် Non-လိင်သက်ဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုနှိုင်းယှဉ်သက်ဆိုင်ရာလိင်အပေါ်လိင်စိတ်နိုးထတစ် differential ကိုသက်ရောက်မှုမရှိခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိချက်၏လက်ရှိပုံစံများ၏တရားဝင်မှုတည်တံ့ခိုင်မြဲကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်များကိုသည့်အမျိုးအစားအတွက်အပြစ်အနာအဆာမှစွပ်စွဲနိုင်ဖြစ်ရသည်။
အလိုအလျောက်ရှောင်ရှားလိုတဲ့သဘောထားကို, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများအတွက်သက်ဆိုင်ရာအမူအကျင့်များနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များဘေးဒဏ်သင့်အတွက်ပြင်းထန်စွာပါဝင်ပတ်သက်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့ကြောင့်ကထပ်မံဤလေ့လာမှု၏တွေ့ရှိချက်တစ်ခု electromyography (တွေ့ရစဉ်) ကို အသုံးပြု. အကဲဖြတ်နိုင်ပိုအလိုအလျှောက်, reflex ဇီဝကမ္မရွံရှာတုံ့ပြန်မှုကိုလည်းထင်ရှားရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ရန်အရေးကြီးပါသည်ပါလိမ့်မယ် labii levator  ဒါမှမဟုတ်တင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သား  အတော်လေးမထိန်းချုပ်ကာကွယ်ရေးတုံ့ပြန်မှုအဖြစ်။
ထို့အပြင်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောအုပ်စုများအတွက်အထူးသဖြင့်လှုံ့ဆော်မှုများ၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆွဲထုတ်သည့်ရွံရှာအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလိမ့်မည်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ထိုကဲ့သို့သော dyspareunia သို့မဟုတ် vaginismus အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အတူအမျိုးသမီးတွေအတွက် arousal လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနာကျင်မှုသို့မဟုတ် vaginistic လက္ခဏာတွေ၏ဖြစ်ပျက်မှုနှင့်ဇွဲရှင်းပြကူညီပေးနိုငျထားတဲ့ရွံရှာအပေါ် impact မထားဘူး။
လက်ရှိတွေ့ရှိချက် arousal ရွံရှာခြင်းနှင့်လိင်နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်မဟုတ်သောလိင်နှင့်ဆက်စပ်သောစက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်လှုံ့ဆော်မှုနှစ်ဦးစလုံး၏ဂုဏ်သတ္တိများကိုဆွဲထုတ်ရွံရှာနှင့်အတူ interplays ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်။ ဒီဆက်ဆံရေးဟာတူညီတဲ့လှုံ့ဆော်မှုဖို့အမှန်တကယ်ချဉ်းကပ်ဆောင်ရွက်မှုတွေကနေတဆင့်အမူအကျင့်အဆင့်ကိုရောက်ရှိဖို့ပုဂ္ဂလဒိဋ္အစီရင်ခံစာများကျော်လွန်တတ်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းဖြင့်အသုံးပြုပုံအထူးသညျဤတွေ့ရှိချက်များထပ်မံလက်ရှိစာပေ-အခြေစိုက်စခန်း။ တနည်းအားဖြင့်ဒီလေ့လာမှုကလူနေဆဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသည်ဟုအများအပြားလှုံ့ဆော်မှု၏စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်သဘောသဘာဝရှိနေသော်လည်းပျြောမှေ့စလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့စီမံခန့်ခွဲအဘယ်ကြောင့်ရန်အဖြစ်ရက်သတ်မှတ်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုတိုးတက်လာအောင်ကူညီပေလိမ့်မည်။ တွေ့ရှိချက်များ၏ပစ္စုပ္ပန်ခင်းကျင်းမြင့်မားတဲ့လိင်စိတ်နိုးထဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေမည်အကြောင်းအကြံပြုဒါပေမယ့်လည်းနိမ့်လိင်စိတ်နိုးထအထူးသဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများသို့မဟုတ်အလုပ်မဖြစ်များ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်သော့ချက်အင်္ဂါရပ်ဖြစ်အံ့သောငှါအကြံပြုသာ။
နောကျဆကျတှဲ S1 ။
ဤရွေ့ကားအမူအကျင့်တာဝန်များကို,2အစုတခုထဲမှာ2မိနစ်ရုပ်ရှင်ကလစ်အောက်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ကျပန်းပေးထားခဲ့ကြသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုတာဝန် (4 ခြေလှမ်းများအတွက်ပေးထားခဲ့သည်မြင် နည်းလမ်း).
နောကျဆကျတှဲ S2 ။
တွေ့ရှိချက်များ၏ပုံစံဟာ 16 အပြုအမူအလုပ်များကိုအလုံးစုံတို့အဘို့အလားတူဖြစ်ဟန်ကြောင်းကိုပြသနိုင်ရန်အတွက်နည်းလမ်နှင့် (SD) အုပ်စုတစ်စုနှုန်းတစ်ဦးချင်းစီအမူအကျင့်တာဝန်များအတွက်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ရွံရှာ ratings ၏စံသွေဖီ။
နောကျဆကျတှဲ S3 ။
အဆိုပါ 16 အပြုအမူအလုပ်များကိုအသီးအသီးအဘို့ (post ကို hoc) ပုဂ္ဂလဒိဋ္ ratings ၏နည်းလမ်နှင့်နျ Standard Deviation (SD) ။ အဆိုပါလိင်ဆက်စပ်မှုဟာ vas ကနေယုတ်ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ Task ကိုအရေအတွက်အား 5, 8, 11, 15 နှင့် 16 လိင်သက်ဆိုင်ရာထည့်သွင်းစဉ်းစားသည့်အမူအကျင့်တာဝန်များကိုဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့စမ်းသပ်ကာလ၌မိမိတို့ MSc စီမံကိန်း၏တစိတ်တပိုင်းပွညျ့စုံများနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ (Aafke Vogelzang, Marijke Zwaan, Inge Vriese) အဖြစ်ဒီလေ့လာမှုမှာပါဝင်ခဲ့သောကျောင်းသားများကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ M.Sc. Co-ကြီးကြပ်ဒေါက်တာ Johan Verwoerd ကျေးဇူးတင်ပါတယ် စာဖတ်ခြင်းဟာအဘို့အကျောင်းသားများနှင့်လည်းအတူတကွ Lonneke ဗန် Tuijl နှင့်အတူ မူကြမ်း လက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏ဗားရှင်း။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကလက်ရေးမူများမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းအပေါ်မှတ်ချက်ပေးဘို့ဒေါက်တာ Fiona ဖြစ်သူ Scott-Fitzpatrick ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: သမဝါယမ PJdJ ။ သမဝါယမ PJdJ: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: သမဝါယမ။ ဓါတ်ကူပစ္စည်း / ပစ္စည်းများ / ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ tools များလှူဒါန်းခဲ့: သမဝါယမ PJdJ ။ သမဝါယမ PJdJ: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
ရွံရှာရောဂါအန္တရာယ်ကနေကာကွယ်ပေးဖို့ပြောင်းလဲကြောင်း Curtis V ကို, Aunger R ကို, ခွေးရူးပြန်ရောဂါ T က (2004) အထောက်အထား။ : P ရွိုင်းက S Lond B ကဇီဝ 7: S131-S133 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ရောဂါရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူတစ်ခုသပ္ပါယ်မှုစနစ်အဖြစ် Curtis V ကို, က de Barra က M, Aunger R ကို (2011) စက်ဆုပ်ရွံရှာ။ ဖီလိုသည် T ရွိုင်း Soc B ကို 12: 389-401 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Rozin P ကို, Nemeroff ကို C, Horowitz က M, Gordon ကမြင်ပါတယ်, B, Voet W က (1995) ကိုကိုယ်ပိုင်များ၏နယ်ခြားမဲ့: ညစ်ညမ်းထိခိုက်လွယ်မှုနှင့်အာနိသင်ဟာခန္ဓာကိုယ် aperture နှင့်အခြားခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများ။ J ကို Res Pers 29: 318-40 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Borg က C, de Jong က PJ, Weijmar Schultz W က (2010) Vaginismus နှင့် Dyspareunia: တမင် ရည်ရွယ်. စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် Response vs. အလိုအလျောက်။ J ကိုလိင် Med 7: 2149-57 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Vaginismus နှင့် Dyspareunia အတွက် de Jong က: P, ဗန် Overveld M က, Weijmar Schultz W က, ပီတာက M, Buwalda က F (2009) စက်ဆုပ်ရွံရှာခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းထိခိုက်လွယ်မှု။ Arch လိင်ပြုမူနေ 38: 244-52 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Stevenson မှ R ကို, ဖြစ်ရပ်မှန် T က, ကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ်လိင်စိတ်နိုးထ၏ Oaten M (2011) Effect လိင်-Related နှင့် Non-လိင်-Related မှတုံ့ပြန်ချက်စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်တွေကိုပေါ်မှာ။ Arch လိင်ပြုမူနေ 40: 79-85 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
erotica မှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုလွှမ်းမိုး Koukounas အီး, McCabe M (1997) လိင်နှင့်စိတ်ခံစားမှု variable တွေကို။ ပြုမူနေ Res Ther 35: 221-30 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
အန္တရာယ်-ဆည်းပူးနေအမူအကျင့်အပေါ် Ditto PH သည်, Pizarro DA, Epstein eb, Jacobson ဂျာ Macdonald TK (2006) Visceral လွှမ်းမိုးမှု။ 19-99: J ကိုပြုမူနေ 113 ပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Ariely: D, Loewenstein, G (2006) ယခုအချိန်တွင်၏အပူ: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ချအပေါ်လိင်စိတ်နိုးထ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ 19-87: J ကိုပြုမူနေ 98 ပြုလုပ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Fessler DMT, Arguello AP, Mekdara JM, Macias R ကို (2003) စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် sensitivity ကိုများနှင့်အသားစားသုံးမှု: ကိုယ်ကျင့်တရားသတ်သတ်လွတ်တစ်ခု emotivist အကောင့်တစ်ခုစမ်းသပ်။ အစာစားချင်စိတ် 41: 31-41 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ရွံရှာဖို့ sensitivity ကိုအတွက် Haidt J ကို, McCauley ကို C, Rozin P ကို ​​(1994) တစ်ဦးချင်းကွဲပြားမှု: တစ်ဦးကစကေးနမူနာရွံရှာ elicitors ခုနစ်ဒိုမိန်းများ။ 16-701: Pers 13 ကွဲပြားခြားနားသော Indiv ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Salvatore S က, Cattoni အီး, et al Siesto, G, Serati M က, Sorice P ကို။ အမျိုးသမီး (2011) ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်။ EUR J ကို Obstet Gyn RB 156: 131-136 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Rozin P ကို, Haidt J ကို, McCauley CR (2008) စက်ဆုပ်ရွံရှာ။ ခုနှစ်တွင်: Lewis က M ကို, Haviland MJ, အယ်ဒီတာများ။ စိတ်ခံစားမှုများလက်စွဲစာအုပ်။ 3rd ed ။ နယူးယောက်: Guilford နှိပ်ပါ။ 757-76 ။
Borg က C, de Jong က PJ, Renken RJ, Georgiadis JR (2012) စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ်ရိုရွံရှာဒိုမိန်းတစ်ခု function ကိုအဖြစ်တိုကျရိုကျ-posterior နားချင်းဆက်မှီ modulates ။ Soc Cogn neuroscience အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှု။ စာနယ်ဇင်း၌တည်၏။ Doi: 10.1093 / စကင် / nss006.
Olatunji bo, Haidt J ကို, McKay: D, ဒါဝိဒ် B က (2008) Core, တိရစ္ဆာန်သတိပေးချက်နှင့်ညစ်ညမ်းရွံရှာ: ကွဲပြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး, အမူအကျင့်, ဇီဝကမ္မနှင့်လက်တွေ့ဆက်စပ်မှုနှင့်အတူရွံရှာ၏သုံးမျိုးစုံ။ J ကို Res Pers 42: 1243-59 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ဗန် Overveld WJM, de Jong က PJ, ပီတာ ML, Cavanagh K ကို Davey GCL (2006) စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် propensity နှင့်ရွံရှာ sensitivity ကို: တိကျတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေမှ differential ဆက်စပ်ဖြစ်ကြောင်းသီးခြား Construction ။ 41-1241: Pers 52 ကွဲပြားခြားနားသော Indiv ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
သွေးဆေးထိုး-ဒဏ်ရာ phobia နှင့်ပင့်ကူ phobia မှာတွေ့ရှိလိင်ကွဲပြားမှုဖြန်ဖြေရွံရှာ sensitivity ကိုများအတွက် Connolly KM, Olatunji bo, Lohr JM (2008) အထောက်အထား။ 44-898: Pers 908 ကွဲပြားခြားနားသော Indiv ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ဗန် Overveld M က, ဂျုံ PJ, ပီတာ ML (2010) စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် propensity နှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုစကေး Revised: ရှောင်ရှားခြင်းအပြုအမူများအတွက်၎င်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်တန်ဖိုး။ 49-706: Pers 11 ကွဲပြားခြားနားသော Indiv ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
Fergus က TA, Valentine DP (2009) စက်ဆုပ်ရွံရှာဘွယ် propensity နှင့်ထိခိုက်လွယ်မှုစကေး-Revised: တစ်လျှော့ချ-item ကိုဗားရှင်းတခုရဲ့စာမေးပွဲ။ J ကိုပူပန် disorders 23: 703-10 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်
ဗန် der Velde J ကို, Everaerd W က (2001) နှင့် vaginismus မရှိဘဲအမျိုးသမီးတွေအတွက်အတင်းအဓမ္မတင်ပါးဆုံတွင်းကြမ်းပြင်ကြွက်သားလှုပ်ရှားမှု, ကြွက်သားအသိအမြင်နှင့်အတွေ့အကြုံရှိခြိမ်းခြောက်မှုအကြားဆက်ဆံရေးဟာ။ ပြုမူနေနှင့် Res ကုထုံး 39: 395-408 ။ အွန်လိုင်းဤဆောင်းပါးကိုရှာမည်